Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao farany momba ny Hawaii » Hawaii COVID-19 haavon'ny risika manomboka amin'ny avo ka hatramin'ny antonony
Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Hita • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Kamaainas • Vaovao • fanorenana • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Mihatsara ny toetran'ny COVID any Hawaii
The Aloha State of Hawaii dia nifindra avy amin'ny risika avo lenta mankany amin'ny risika antonony anio ao amin'ny lisitra Covid Act Now.
Ny tranga COVID-19 tany Hawaii, ny hopitaly ary ny fahafates dia nihena tao anatin'ny iray volana lasa izay.
Ny fanjakana dia nahatratra ny tsimatimanota ho an'ny vaksiny mifandraika amin'ny mponina izay nahazo fatra farafaharatsiny iray tao anatin'ny andro vitsivitsy izay.
Ny governoran'i Hawaii David Ige dia mbola manome soso-kevitra ny hamerana ny dia ihany ho an'ny dia izay heverina fa ilaina.
Covid Act Now dia manome isa 5-loza mety hitranga amin'ny fanjakana sy distrika manerana ny firenena mba hahafantaran'ny olom-pirenena sy ny tompon'andraikitra amin'ny governemanta hahatakatra tsara kokoa ny satan'ny COVID any amin'ny faritra misy azy ireo. Ny Act Now Coalition dia fikambanana tsy miankina 501 (c) (3) mahaleo tena naorin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo tamin'ny volana martsa 2020. Covid Act Now dia fandraisana andraikitra mifantoka amin'ny COVID hanampiana ny olona handray fanapahan-kevitra am-pahalalana amin'ny fanomezana tahirin-kevitra ara-potoana sy marina momba ny COVID any Etazonia.
Nandritra izay 30 andro lasa izay, Nihena ny isan'ireo tranga, hopitaly ary maty tany Hawaii. Honolulu County, Hawaii, dia nitatitra fa manana fandriana ICU olon-dehibe 156. 86 dia nofenoin'ireo marary tsy COVID ary 33 kosa nofenoin'ny marary COVID. Amin'ny ankapobeny, 119 amin'ny 156 (76%) no feno. Ity dia manolotra fahaiza-miasa sasany hisintona fitomboan'ny tranga COVID.
Nahatratra ny tsimatimanota andiany ny fanjakana tao anatin'ny roa andro lasa izay niaraka tamin'ny tahan'ny vaksiny 73.9% ny mponina nahazo fatra farafaharatsiny. Ao amin'ny County Honolulu, Hawaii, 720,162 73.9 ny olona (647,576%) no nahazo farafaharatsiny fatra iray ary 66.4 (12%) no vita vaksiny tanteraka. Izay rehetra farafaharatsiny 0.001 taona dia mendrika hatao vaksiny. Latsaky ny XNUMX% ny olona nahazo fatra no niaina fihetsika mahery vaika.
Amin'ny salan'isa, ny tahan'ny aretina ao amin'ireo nosy dia 69% miaraka amin'ny taha fitiliana tsara 3%. Misy tranga vaovao 7.3 amin'izao fotoana izao izay voatatitra isaky ny 100,000.
Ny faritanin'i Honolulu, Hawaii, dia marefo ambany noho ny ankamaroan'ny distrikan'i Etazonia. Ireo vondrom-piarahamonina misy marefo kokoa dia manana toe-karena ara-toekarena, ara-tsosialy ary ara-batana efa nisy izay mety hanasarotra ny famaliana sy ny fanarenana avy amin'ny valan'ny COVID.
Ny fitsangatsanganana dia tokony hialana raha tsy ilaina izany, na mpanao vaksiny feno vaksiny.
Ny sarontava dia asaina ho an'ny olona vita vaksiny eny amin'ny habakabaka ampahibemaso mba hampihena ny fiparitahan'ny karazana Delta. Ny olona tsy vita volo dia tokony hanohy hisaron-tava amin'ny toerana malalaka rehetra.
Ny fivoriana any anaty dia tokony hialana amin'ny olona ivelan'ny trano akaiky, raha tsy vita vaksiny tanteraka.
Ny sekoly dia afaka manome soa aman-tsara ny fianaran'ny olona raha tsy efa misy ireo fepetra fanaraha-maso ny aretina.
Fizarana fitsaboana miady amin'ny COVID tsy ho an'ny...
Mpanatanteraka GE teo aloha antsoina hoe Tale Jeneralin'ny Unical Aviation